Heshiiskan lagu sheegey in ay Ethiopia la gaadhay jabhad hubaysnayd oo Canfar waa abaal gudkii Galbeedka gobolka Sitti – Xeernews24
Heshiiskan lagu sheegey in ay Ethiopia la gaadhay jabhad hubaysnayd oo Canfar waa abaal gudkii Galbeedka gobolka Sitti
22. Juli 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Warbaahinta dawlada Etoobiya ayaa lagu faafiyey in jabhad hubeysan oo fadhigeedu yahay Eritrea ay heshiis qaadatay. Koox mucaarad ah oo loogu yeedho Xisbiga Shacabka Canafrta – APP – ayaa wadanka ku soo noqotay, sida ay sheegtay dawladu.
Gudoomiyaha xisbiga APP, Alo Aydahis, ayaa xusay in ay dawlada kula heshiyeen in ay dalka ku soo laabtaan si ay halgankooda ugu sii wadaan si nabad ah iyaga oo raacaya sharciga dalka.
Itoobiya ayaa sheegtay in ay hogaamiyaha la socdeen xubno gaadhay 400, laakiin faafhfaahin lagama bixin waxa ay kala yihiin iyo in ay hubkoodi la soo galeen iyo in kale.
Wax cusub ma ahaa in xukuumada Itoobiya heshiis la gasho garabyo ka mid ah jabahada lidka ku ah, halka kooxo kale oo isla jabhadahaas sheegta weli sii wadaan gulufka dhanka ka ah dawlada.
Canfarta waa dad reer guura ah oo degan dhul baaldhan oo ku fidsan wadamada Itoobiya, Jabuuti iyo Eritrea. Waxaa jira kooxo u ololeeya dawlad gaar ah oo dadka Canfrata ah yeeshan, hasyeeshe waxaa ka awood badan Canfarta ku doodeysa in wax lala qabsado xukuumadaha ka jira degaanada ay Canfartu degan tahay.
Gudoomiyaha ismaamulka Canfarta, Xaaji Siyum Awel, ayaa dhankiisa ka sheegay in ay aad u soo dhaweynayaan go’aanka xisbiga APP.
Waxaa xusid mudan, in ay jiraan jabhado kale oo gobolka Canfarta dhaqdhaqaaq hubeysan ka wada kuwaas weeraro la beegsaday xaruumo dalxiis iyo dad shisheeyey ah oo gobolka u joogay tamashleyn.
Warkan ayaa ku soo beegmay iyada oo shalay saaxafada taageerta Itoobiya ay sheegtay in ciidamada gaarka ah DDSI ay fashiliyeen koox ONLF ah oo dalka soo galeysay. Warbixinta ayaa lagu xusay in 4 falaagada ah la dilay, halka 3 kale gacanta lagu dhigay.
Dawlada Itoobiya iyo maamulka Jigjga ayaa hadda ka hor ku celceliye in ay ka takhaluseen ONLF oo loo aqoonsaday urur argagixiso ah.
Docda kale, afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge ayaa xaqiijiye in la dilay hogaankii gaashandhiga ee jabhada, Sheekh Deeq Maxamad, mar uu dagaal ka dhacay meel u dhow xadka Soomaaliya iyo DDSI. Hirmooge ayaa sheegay in ay dagaalka ka qayb-qaateen maleeshiyaad Soomaaliyeed, ciidanka federaalka ah iyo Liyu boolisku.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/07/rebelle-Afar.png 160 240 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-07-22 11:05:322016-07-22 11:06:20Heshiiskan lagu sheegey in ay Ethiopia la gaadhay jabhad hubaysnayd oo Canfar waa abaal gudkii Galbeedka gobolka Sitti
Djibouti,Ethiopia,iyo Shinaha ayaa bilaabi doona mashruuc lagu qiyaasay qiimaha... Booliska Magaalada Munchen ee dalka Jarmalka oo soo af jaray toogashadi sha...